Honda Y-E-S Award 2017 (ဒုတိယအဆင့်ရွေးချယ်ခြင်း)
သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များမှ ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ထားသည့်
ကျောင်းသား/သူ (၁၀)ဦး သည် ဇူလိုင်လ(၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်အထိ အောက်ပါနေရာများ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းကြပါရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)တို့ မှØ ကျောင်းသား/သူများသည် မိမိတို့ တက္ကသိုလ်များတွင် လျှောက်လွှာရယူကာဖြည့်သွင်းရပါမည်။
(သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များမှ လျှောက်လွှာများကို ၁၄.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ထက်နောက်မကျစေဘဲ MAJA ရုံးခန်းသို့ ပေးပို့ စေလိုပါသည်။)
ရန်ကုန်မြို့ရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/သူများသည်Ø မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း၊ ၇လွှာ၊တိုက် ( C )၊ ပုလဲကွန်ဒို တွင် လျှောက်လွှာရယူကာ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
ဒုတိယအဆင့် ရွေးချယ်ခြင်းစာစီစာကုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖြေဆိုရပါမည်။Ø
စာမေးပွဲအချိန် ။ ။ မနက် ၉နာရီခွဲ မှ ၁၁နာရီခွဲအထိ
နေ့ရက် ။ ။ ၂၃.၇.၂၀၁၇ (တနင်္ဂနွေ)
နေရာ ။ ။
၁) 19 (A)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ အိုးဘို။
၂) MAJA Centre ၂ လွှာ၊ တိုက် (C)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။
(၁) မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)တို့ မှ ကျောင်းသား/သူများသည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)တွင် ဖြေဆိုရပါမည်။
(၂)ရန်ကုန်မြို့ရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/သူများသည် MAJA Centre တွင်ဖြေဆိုရပါမည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁၈ ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲ (၂၀၁၇)
1. လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်အချိန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ မှ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်အထိ၊ ပိတ်ရက်မရှိလက်ခံပါသည်။ ၉း၃၀ နာရီ မှ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ၊
နေ့လည်ပိုင်းတွင် ၁၃း၀၀ နာရီ မှ ၁၆း၀၀ နာရီအထိ
2. လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်နေရာ (၁) မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း(MAJA)
ပုလဲကွန်ဒို၊ အခန်း(၇၀၇)၊ တိုက်(C)၊
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
(Phone- 95-9-8612151, 95-9-262602121 )
လမ်း ၈၀ နှင့် ၁၂ လမ်း ထောင့်၊ မန္တလေးမြို့
(Phone- 02-31762, 09 258839428)
စိတ်ကြိုက်ခေါင်းစဉ် (Free Topic)
4.(က)ပြောရမည့်အချိန်တာ ၄ မိနစ်နှင့် ၅ မိနစ်အတွင်း
(ခ)အမေးအဖြေ ၂ မိနစ်ခန့်
(၃) မိမိပြောကြားမည့်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပြောကြားမည့်အကြောင်းအရာ စာမူ
(၂) အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
(၃) ယခင်က ဂျပန်သံရုံးနှင့် MAJA မှကျင်းပခဲ့သော စကားပြောပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိဖူးသူမဖြစ်ရ။
(၁) လျှောက်လွှာတင်ထားသော မိမိ၏ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၃မိနစ်ခန့် ပြောဆိုယှဉ်ပြိုင်ပြီး အကဲဖြတ်ဒိုင်များ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရမည်။
နေ့ရက်။ ။ 13.8.2017 (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန်။ ။ 9:00 AM
နေရာ ။ ။ MAJA Centre
အခန်းအမှတ် G-21, G-22 ၂လွှာ၊ တိုက် - C , ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
နေ့ရက်။ ။ 5.8.2017 (စနေနေ့)
နေရာ ။ ။ HITO Centre
လမ်း ၈၀ နှင့် ၁၂ လမ်း ထောင့်၊ မန္တလေးမြို့။
ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသူ (၁၅) ဦးခန့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်သူများ၏ စာရင်းကို MAJA Website နှင့် Facebook Page နှင့် ဂျပန်သံရုံး Website များတွင် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ( တနင်္လာ) တွင် ကြေငြာသွားပါမည်။ တစ်ဦးချင်းကိုလည်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။
9. ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ၉း၀၀ နာရီ မှ ၁၂ နာရီအထိ
PARKROYAL HOTEL (Ball Room)
33, Alan Pya Phayar Road, Dagon Township, Yangon.
ဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန် ပညာသင်ဟောင်းအသင်း(MAJA) နှင့် HITO CENTER သို့ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
MAJA ဖုန်း 95-9-8612151, 95-9-262602121
HITO CENTER ဖုန်း 02-31762, 09 258839428
ဂျပန်ဘာသာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) ရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်မည့်သူများ ဇူလိုင် (၂၀) ရက်နေ့ (ကြာသပတေး) နေ့တွင် နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးသွင်းကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
4 July at 15:47 ·
ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း (Japan Foundation)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန် ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA)တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံး နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပြီး [ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT)]၏ ရှင်းလင်းပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT)ကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူဦးရေမှာ မကြာသေးမီ နှစ်အတွင်း လျှင်မြန်စွာတိုးမြင့်လာနေပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း နှစ်စဉ်၁.၅ဆနှုန်းဖြင့် တိုးတက်လာနေပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် နှစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့် စာမေးပွဲအတွက် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူပေါင်း ၉,၆၉၇ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
အခြား တစ်ဖက်တွင် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT)မှာ Level အလိုက် မည်ကဲ့သို့ ပုံစံဖြင့် စီစဉ်ပြီး အမှတ်ပေးနေသည် ဆိုသည့် အကြောင်းအရာကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ရှင်းလင်း ပြောပြပေးနိုင်ပါက နောက်ပိုင်းတွင် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် ကိုက်ညီသည့် Levelစာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT)၏ စာမေးပွဲမေးခွန်းကို လက်ရှိတွင် ပြုလုပ်နေသော ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း(Japan Foundation)မှ သုတေသီက ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ (JLPT)အပေါ် နားလည်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် စာမေးပွဲတွင် စုစည်းထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ ဘာသာရပ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
EJU 2017 2ndSession
Date of Exam: November 12, 2017 (Sunday)
Application Period in Yangon & Mandalay
3.7.2017 to 28.7.2017
Application &Examination Venue:
Room No. 707, 7th floor, Building- C, Pearl Condo,
Bahan Township, Yangon, Myanmar. Phone : 09262602121
Corner of 12th and 80th Street, Mandalay. Phone: 02 31762
Examination Fee: USD 15
Subjects (May be Chosen)
- Japanese asaForeign language
- The Program on Design Management -
Note: The Pre-Training Report will be also used asareference material in the screening process of applicants.
4. Outline of your company/ organization
(Please giveabrief description or outline of your company/organization. In addition, please also attachabrochure of your company/organization if available)
5. Your position and name of your department
(preferably by attaching an organizational chart indicating your position)
7. Major customers of your products
8. Present activities for design management at your company
9. Most critical problems you are now facing related to design management, indicating their causes from your viewpoint
10. Possible measures to solve such problems together with limitation factors
11.Your expectations of the program in relation to the described problems
Production capacity will expand.[About ] %
Productivity will increase.[About ] %
Product and service quality will improve.[About ] %
Costs will be reduced.[About ] %
The following question is relevant to the above Question 6. Supposing that the expense (5,500 USD) is defined as “1”, describe the benefits obtained from the HIDA traini
g. Tick the following statement that applies to you. A very rough estimate is fine. Your response is highly appreciated.